Kukuudza basa rezvipfeko zve ballet - Nhau - Shenzhen Wudongfang Culture Communication Co., Ltd.
Imba > Nhau > Nhau dzekambani > Kukuudza basa rezvipfeko zve ballet
Kukuudza basa rezvipfeko zve ballet
Kunyangwe vari mukirasi yekudzidzira kana padanho, vatambi vanopfeka zvakanyatsogadzirwazvipfeko zve ballet. Although some zvipfeko zve ballet may change styles with fashion, for dancers, practice clothes are not just for good looks, and each of them has its practical role.
Tights uye tights ndizvo zvakakosha zvekusimbisa zvipfeko zvevatambi. Mune zvekare munda we ballet, vasikana vanowanzo pfeka matinji matema ne pink tights. Zvimwe zvikoro vanoda kurega vasikana vavo kupfeka masokisi uye akasiyana mavara ane mavara. Ballet zvipfeko dzimwe nguva zvine siketi pfupi yakagadzirwa nezvinhu zvakatetepa zvakanyanya kunze kwe tights. Vakomana vanowanzo pfeka machena-mapfupi-t-shirts ane matinji matema.
Pakutanga kwetsika, "makumbo" anogona kubatsira vatambi kukurumidza kuzadzisa chinangwa chekudziya. Kana tsandanyama dzangopisa, dzinofanira kubviswa. Muviri wakarukwa nemvere dzemakwai unowanzo shandiswa mukudzidzira kwevatambi kumirira kutamba kana kutsiva.
Bvudzi dhizaini zvakare chikamu chemupiki wemutambi. Iwo echinyakare ballet vasikana vanofarira kuisa yavo hafu-kureba bvudzi kuseri kwemisoro yavo, kuitira kuti mitsara iri pamutsipa nemusoro ive yakajeka kwazvo.
Ballet nyoro shangu shangu dzinopfekwa nevasikana nevakomana vasikana vasati vadzidzira zvigunwe zvavo. Izvo zvakagadzirwa neyakareruka nhete yeganda kana kanivhasi. Vasikana vanopfeka pinki uye vakomana vanopfeka nhema kana chena. Bhutsu dzinofanirwa kuve dzakaputirwa dzakakomberedza tsoka. Toe shangu dzine misoro yakaoma, dzinofanirwa kunge dzakanyatsokwana. Ribhoni rinofanira kusonwa kubhutsu nemutambi wega wega nenzira yake. Mushure mekupfekedza shangu, ribhoni rakayambuka katatu kukomberedza tsoka, uye musoro weribhoni unofanirwa kuve wakasungwa zvakanaka. Vatambi vazhinji vanorovawo shangu kuitira kuti satin yema pointe shangu arege kupenya pasi pemwenje yemwenje.
Yapfuura:Ballet TUTU siketi inogona kuratidza mafambiro emutambi
Tevere:Mhemberero uye zano re swan Lake ballet